कुन बार के काम शुरु गर्दा प्रशस्त धन कमाउन सकिन्छ ? जान्नुहोस् – Laliguras Online
कुन बार के काम शुरु गर्दा प्रशस्त धन कमाउन सकिन्छ ? जान्नुहोस्
July 4, 2019 May 10, 2020 admin	0 Comments
हरेक व्यक्तिको जीवनमा जन्म बार र राशीले ठूलो प्रभाव पार्ने गर्छ। जन्मेको बार र राशिले उनीहरुको स्वभाव र भविष्य समेत बताउने गर्छ। त्यसैगरी तपाईको जागिर वा व्यापारमा समेत राशी र जन्म बारको ठूलो प्रभाव पर्ने गर्छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार कुनै पनि कार्य नोकरी वा व्यापार सुरु गर्दा आफू जन्मेको बार र राशीमा समेत ध्यान पुर्याउन आवश्यक हुन्छ। आज हामी तपाईहरुलाई सात बार मध्ये कुन दिन कुन कार्य गर्छ शुभ हुन्छन भन्नेबारे जानकारी दिन जाँदै छौँ जसबाट तपाईलाई जीवनमा ठूलो सफलता हँसिल गर्ने अवसर मिल्नेछ।
← बुटवलको पाखापानीमा दुर्घटना, १ जनाको मृत्यु २ जना घाइते……
पेटको दुखाई निको गर्ने ४ घरेलु तरिकाहरु….. सक्दो शेयर गरौ →